Kuhlawuliswe iCubana Lounge eGoli | News24
Kuhlawuliswe iCubana Lounge eGoli
Johannesburg - IGauteng Liquor Board isihlawulise indawo yobumnandi eGoli, iCubana Lounge, eseFourways ngemali engu-R150 000 ngokudayisa utshwala sekushaye izithuba zabo-02:00 ekuseni ngosuku lwesigameko sokuhlaselwa kwabesifazane ababili esibandakanya owayeyisekela likaNgqongqoshe, uMduduzi Manana.
Ivideo etshengisa uManana eshaya abesifazane ekilabhini ngo-Agasti yasabalala ezinkundleni zokuxhumana, yaholela ekutheni esule esikhundleni sakhe.
OLUNYE UDABA:BUKA: Okwenzeke ngesikhathi uManana "ehlasela" owesimame
UManana wawavuma amacala amathathu okushaya eNkantolo yeMantshi yaseRandburg.
Njengamanje iCubana Lounge isizithole obishini.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho eGauteng, uLebogang Maile, uthe ikilabhu eseFourways iphambane nomthetho iGauteng Liquor Act okuyiwo ovumela ukudayiswa kotshwala ezindaweni zobumnandi phakathi kwamahora angu-08:00 kuya kwangu-02:00 ekuseni.
UMaile, uthe iCubana Lounge akuyona yodwa ikilabhu ephambana nemibandela yezincwadi zokudayisa utshwala kanti iLiqour Board namaphoyisa azogasela emakilabhini njengoba sekusondele isikhathi sikakhisimusi.